फस्टाउँदै अवैध स्वास्थ्य क्लिनिक
Tue, Feb 18, 2020 at 1:19pm
स्ववियु निर्वाचन अनिश्‍चितकालका लागि स्थगित #आहा खबर# प्रधानमन्‍त्री ओली मनमोहन सेन्‍टरमा भर्ना #आहा खबर# गाडी र जग्गा किन्नेलाई भन्दा तरकारी लगाउनेलाई चर्को ब्याज #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा जागिर[सूचनासहित] #आहा खबर# नक्सा सच्याउन भारतीय सरकारलाई अनुरोध #आहा खबर# कोरोनाभाइरसका कारण चीनको वर्षकै ठूलो राजनीतिक बैठक स्थगित #आहा खबर# थुनामुक्त भएपछि महराले भने– राष्ट्रिय स्वाधिनता मेरो मुख्य प्राथमिकता #आहा खबर# इस्टर्न रिजन टी २० मा ५ टिममात्रै, नेपालको पहिलो खेल मलेसियासंग #आहा खबर# नेपालमा एडिबीको खर्च ऐतिहासिक #आहा खबर# माैसम : धेरै ठाउँमा बाक्लो तुवाँलो लाग्ने, पूर्वका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना #आहा खबर# पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ घट्याे #आहा खबर# सरकारनै बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा #आहा खबर# कालापानी जाँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल #आहा खबर# संस्कृतका विद्यार्थीले नौ वर्षदेखि पाएनन् प्रमाणपत्र #आहा खबर# कर्णालीमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण स्वास्थ्यका ९६ भवन अलपत्र #आहा खबर#
सिरहास्थित मिर्चैया नगरपालिका–३ राघोपुरकी शोभादेवी चौधरीलोरी व्यथा लागेपछि परिवारका सदस्यले एम्बुलेन्समा लहान–३ अस्पताल चोकस्थित सुनिता श्रेष्ठको निजी क्लिनिकमा लगे। तीन छोरीकी आमा शोभा मिर्चैयामा अस्पताल भए पनि लहानमा भरपर्दो उपचारको आसमा आएकी थिइन्। उनले पहिला पनि नर्सिङ निरीक्षक श्रेष्ठसँग जाँच गराएकी थिइन्। त्यसैले उनी श्रेष्ठकै क्लिनिकमा आएकी हुन्।
त्यहाँ आएपछि श्रेष्ठले मेरीगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा पठाएको शोभाकी आफन्त लिल्सा चौधरीले बताइन्। रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका (राउ) स्मारक अस्पताल (सरकारी) सँगै मेरीगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिक छ। ‘त्यहाँ हिँड्नुस, जाँचयन्त्र राम्रो छ, राम्रोसँग जाँचिदिन्छु भने’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै लिल्साले भनिन्। शोभालाई लिएर गएकी आफन्त लिल्साका अनुसार बच्चा जन्मिन ढिला हुँदै गएपछि डर लाग्न थाल्यो। कतै बाहिर लग्नुपर्छ भनेर सोध्दा डाक्टर र दिदी (नर्स) हरूले ‘पैसा बढी भएको छ, किन लग्नेबाहिर यहीं भैहाल्छ,’ भनेर ढाड्स दिएपछि उनी चुप लागिन्।
‘राति शोभालाई अर्को कक्षतिर लगेपछि म पनि पछिपछि दौडिँदै गएँ,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टर र दिदीहरूले हप्काएर फर्काइदिनुभयो। ’ केहीबेरमै डाक्टर र दिदीहरू दौडादौड गर्न थालेपछि उनले नर्सलाई सोधिन, ‘के भयो ?’ जबाफ आयो, ‘किन अत्तालिनुभएको। हामीले बच्चालाई बचाउन सकेनौं, आमाको हालत पनि नाजुक छ। ’ यो खबरले परिवार शोकमा प¥यो। छोराको आसमा शोभा चौथो पटक गर्भवती भएकी थिइन्।
बच्चाको घाँटीमा बेरिएको साल निकाल्न ‘सक्सन मेसिन’ प्रयोग गर्दा थिँचिएर मृत्यु भएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै लिल्साले बताइन्। साल चुँडिएको तथा पाठेघरमा समेत धक्का पुगेर उच्च रक्तश्रावले शोभाको अवस्था पनि नाजुक बनेको उनले बताइन्। घटनाबारे तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा फोन गरी जानकारी गराएको लिल्साले बताइन्। जानकारी पाएपछि आएको डिएसपी भेषराज रिजालसहितको प्रहरी टोलीले शोभालाई उद्धार गरेर थप उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल लग्यो। शोभालाई नोबेल अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको समाचार नागरिकमा छ ।
मेरिगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिक एन्ड डाइगनोस्टिक सेन्टरलाई सुत्केरी सेवा दिने अनुमति नभएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। यो पोलिक्लिनिकले गैरकानुनी रूपमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचारमा लापरबाही गर्दा शिशुको ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन। जिल्लामा नियामक निकायको मौनताका कारण फस्टाउँदै गएका निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचारमा भएको लापरबाहीका घटना धेरै छन्।
गत माघ ११ मा भगवानपुर गाउँपालिका–७ की मनिषा यादवलाई तल्लो पेट दुख्ने व्यथाले च्यापेपछि परिवारले राउ अस्पताल लहान लगे। मनिषा पहिलोपटक आमा बन्दै थिइन्। अस्पताल पुगेपछि उनलाई डा. सुशीला सिंहले अस्पतालसँगै रहेको श्रेया पोलिक्लिनिकमा जान सुझाइन्। ‘डा. सिंहले त्यहाँ हिँड्नुस, जाँचयन्त्र त्यहाँ छ, राम्रोसँग जाँचिदिन्छुु भन्नुभयो’, मनिषाले भनिन्। मनिषालाई लिएर गएकी उनकी दिदी रेखाका अनुसार श्रेया पोलिक्लिनिकमा डा. सिंहले भिडियो एक्सरे गरेर बच्चाको अवस्था ठीक छ भनिन्। राउ अस्पतालको ओपिडी पुर्जामै उनले आफ्नो निजी क्लिनिकमा किन्न भन्दै औषधि लेखिदिइन्। ‘नौ सय २० रुपैयाँको औषधि र ६ सय रुपैयाँको भिडियो एक्सरे खर्च बुझाएर डा. सिंहको सल्लाहअनुसार हामी घर फर्कियौं,’ रेखाले भनिन्, ‘औषधि खाँदा पनि दुखाइ बिसेक नभएपछि भोलिपल्ट राउ अस्पताल गयौं। मनिषालाई भर्ना ग¥यौं। तर उपचारमा लापरबाही भयो। डाक्टरले राम्ररी हेरेनन्। ’
नर्सले मनिषालाई प्रसूति कक्षमा लगेको केहीबेरमै पेटभित्रै बच्चा मरिसकेको जानकारी गराएको रेखाले बताइन्। ‘एक दिनअघि जाँच गराएर घर फर्केकी थिएँ। बच्चाको अवस्था ठिक छ भनेका थिए,’ मनिषा सम्झन्छिन्, ‘भोलिपल्ट जाँदा पेटभित्रै बच्चा मरेको भन्दा विश्वासै लागेन। ’ डाक्टरको लापरबाहीका कारण आफ्नो सन्तान खेर गएको उनको गुनासो छ। मनिषाका पति वीरेन्द्रले माघ ११ गतै नै रितपूर्वक जाहेरी लेखाएर इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा दर्ता गराउन जाँदा तत्कालीन डिएसपी राजेश थापाले दर्ता गर्न नमानेको बताए। कमसेकम जाहेरी लिएर घटनाको तथ्य अनुसन्धान गरिदिनुस्, हामीलाई निसाफ दिलाउन पहल गरिदिनुस् भन्दा ‘बबाल गर्न आएको,’ भन्दै झपारेको उनले सुनाए।